Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Ugu yaraan 41 ayaa ku dhintay, 80 kalena way ku dhaawacmeen dab ka kacay xabsiga Jakarta
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Indho Indho Indoneesiya • News • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Barxadda oo aad loo buuxiyay, oo loogu talagalay in lagu hayo 40 maxbuus, ayaa qaabilay 122 qof, sida uu sheegay afhayeenka waaxda xabsiga ee Wasaaradda Sharciga iyo Xuquuqul Insaanka Indonesia.
Dabka ayaa dhacay 2:20 am waqtiga maxaliga ah wuxuuna socday in ka badan saacad.
Sideed maxbuus ayaa isbitaal la dhigay dhaawacyo naftooda halis u ah.
Wareegga gaaban ee korontada ayaa la rumeysan yahay inuu sabab u ahaa dabka.
Saraakiisha fulinta sharciga Indonesia ayaa sheegay in 41 qof ay dhinteen ugu yaraan 80 kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay xabsi ku yaalla magaalada Tangerang oo u dhow magaalada caasimadda ah ee Jakarta maanta.
Sida uu sheegay taliyaha bilayska Jakarta Isbatooraha Guud Fadil Cimraan, dhammaan maxaabiista dhaawacmay, oo ay ku jiraan siddeed maxbuus oo qaba dhaawacyo halis u ah nolosha, ayaa la geeyay isbitaallada u dhow iyo rugaha caafimaadka.
Dabka ayaa dhacay 2:20 subaxnimo ee xilliga maxalliga waxaana la bakhtiiyey 3:30 subaxnimo, waxaana la rumeysan yahay in korontada gaagaaban ay sababtay dabka, ayuu yiri afhayeenka booliska Jakarta Yusri Yunus.
Barxadda oo aad loo buuxiyay, oo loogu talagalay in lagu hayo 40 maxbuus, ayaa qaabilay 122 qof, ayuu yiri Rika Aprianti, oo ah afhayeenka waaxda xabsiga ee Wasaaradda Sharciga iyo Xuquuqda Aadanaha ee Indonesia.
Qaar badan oo ka mid ah maxaabiista lagu hayo xannibaadda ay saameysey waxay ahaayeen kuwa ku lug leh daroogo iyo kiisas la xiriira mukhaadaraadka, sida ay sheegtay.